CodeBlocks: အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းပြီးအသုံးဝင်သော Cross-platform IDE သည် C နှင့် C ++ အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Linux မှ
ယခုနှစ်တွင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရဆက်လက်အတည်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်သည် Stack Overflow Developer စစ်တမ်း 2020 el Linux ကိုပထမနေရာ ကဲ့သို့ အချစ်ဆုံးပလက်ဖောင်း (အကြိုက်ဆုံး) ၏ software developer များ, ဆာဗာ၏လယ်ပြင်၌၎င်း, ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဓိက Operating System ၏လယ်ပြင်၌နှစ် ဦး စလုံး။
ထို့ကြောင့် Linux ကို ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများနှင့်အကောင်းဆုံး OS ဖြစ်သည် ဝါသနာရှင်များ, အသည်းအသန်သို့မဟုတ် Programming ၏ကျောင်းသားများ အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သင်၏စတင်ပါ ပထမအဆင့် ဒီကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ ထိုအဘို့, Linux ကို ကျယ်ပြန့်ပေးပါသည် software applications များနှင့် tools များ ဒီinရိယာထဲမှာလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်တယ် Code :: လုပ်ကွက် သို့မဟုတ်ပိုရိုးရှင်းစွာ CodeBlocks များ (ကျနော်တို့ကဒီမှာအပေါ်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်) ။
DEBIAN 10 တွင် Software Development အတွက် Packages
«ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်ပတ်သက်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုနက်ရှိုင်း software applications များနှင့် tools များ ၏လယ်ပြင်၌သင်ယူနှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်များအတွက်စံပြ ဆော့ဝဲဖွံ့ဖြိုးမှုဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရင်စာမူကိုဖတ်ခိုင်းပါမယ် «သင်၏ GNU / Linux ကို Software Development အတွက်သင့်တော်သော Distro တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပါ» အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်
အောက်ပါအခြား2ကိုလည်း:
1 CodeBlocks: Cross-platform IDE အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသည်
1.1 CodeBlocks ဆိုတာဘာလဲ။
1.4 GNU / Linux ပေါ်မှာဘယ်လိုထည့်သွင်းထားသလဲ။
CodeBlocks: Cross-platform IDE အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသည်
အဆိုပါအညီ CodeBlocks တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"CodeBlocks သည်အခမဲ့ C၊ C ++ နှင့် Fortran IDE ဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးအပြည့်အဝပြုပြင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ IDE တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး၊ အားလုံးသည်ပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်တွင်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်လည်ပတ်မှုရှိသည်".
ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကဒီဟာကပဲ။ CodeBlocks များ ဒါဟာပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပလပ်အင်မူဘောင်သူတို့ကတိုးချဲ့ခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့။ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုပလပ်အင်ကိုထည့်သွင်းခြင်း / သွင်းခြင်းဖြင့်ထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာ, compilation နှင့် debugging လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, ပြီးသား plugins ကထောက်ပံ့ပေးသည်။
မတ်လကတည်းက CodeBlocks သည်လက်ရှိကိုကမ်းလှမ်းသည် တည်ငြိမ်သောတရားဝင်ဗားရှင်း အောက်မှာ အရေအတွက်အား 20.03နံပါတ် 17.12 ၏ယခင်ဗားရှင်းအစားထိုးရာ။ ဘယ်ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်2နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် 400 ကျော်အပြောင်းအလဲများကို။ ဤအချိန်တော်တော်များများသည်တိုးတက်မှုများစွာ၊ အမှားပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အချို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးဝင်သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များပါ ၀ င်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ယနေ့တိုင်အောင် \_ t CodeBlocks သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Cross-platform IDE ဖြစ်သည်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ C, C ++ နှင့် Fortran အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်များစွာသော compiler (MinGW / GCC, Digital Mars, Microsoft Visual C ++, Borland C ++, LLVM Clang, Watcom, LCC နှင့် Intel C ++ Compiler) တို့တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ရှိသည်။ အခြားသူများ) ။ ထိုသို့ပေါ်တွင်အခြေခံသည် wxWidgets GUI ပလက်ဖောင်း.
သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာကျယ်ပြန့်ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ် အပြောင်းအလဲများနှင့်သတင်း၏အစီရင်ခံစာပါဝင်သည် ဒီလက်ရှိဗားရှင်းအသစ်မှာ အရေအတွက်အား 20.03လာမယ့်ခုနှစ်တွင် link ကို။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, CodeBlocks များ အလွယ်တကူကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် download အပိုင်း မည်သည့်စိတ်ဝင်စားပါတီအားဖြင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်အတူတူပင်၏။ နှင့်၎င်း၏တရားဝင် site ပေါ်တွင် ရင်းမြစ် အခြား download option နှင့်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
GNU / Linux ပေါ်မှာဘယ်လိုထည့်သွင်းထားသလဲ။
၎င်း၏ကျယ်ပြန့်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် updated ၌တည်၏ ဝီကီ, အမျိုးမျိုးသော installation နည်းလမ်းများ။ သို့သော် Distro နှင့် version နံပါတ်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအောက်ပါ package ၂ ခုကို install လုပ်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ install လုပ်နိုင်သည် အထုပ်မန်နေဂျာ သင်၏ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံး၏ CLI como GUI ကို:
သို့သော်မှီခိုမှု (သို့) အသုံးဝင်မှုကြောင့်ဖော်ပြခဲ့သောအောက်ပါ package များသည်များသောအားဖြင့်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ထောက်ပံ့မှုကိုတိုးတက်စေသည် CodeBlocks များ နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် အလားတူ IDE ကိုသင်အဆင်ပြေသည်ဟုယူဆသောသို့မဟုတ် install လုပ်သင့်သည်များကို install လုပ်ပါ။
မှတ်ချက်ဖြေ - မှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးတယ်၊ OS OS ကိုပဲအသုံးပြုပြီး၊ compiler ကိုထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ်၊ gcc သို့မဟုတ် g ++၎င်း၏ထောက်လှမ်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «CodeBlocks»၎င်းသည် C, C ++ နှင့် Fortran တို့အတွက်အသုံးဝင်သော Cross-platform IDE ဖြစ်သောအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ စိတ်ထဲတွင် C ++ ပရိုဂရမ်မာများဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည်ဤဘာသာစကားမျိုးနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဆောက်အအုံများနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » CodeBlocks - အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းပြီးအသုံးဝင်သော Cross-platform IDE သည် C နှင့် C ++ အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ IDE၊ တခြားသူတွေကိုမနာလိုစရာဘာမှမရှိဘူး ..
Geogebra အွန်လိုင်း ဟုသူကပြောသည်
Geogebra Online ကိုပြန်သွားပါ